ISA server by Silencez Mutex - issuu
0ISA Server 2006 Configuration2010ISA Server 2006
Configurationwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံရာမညဖို့လျပညးံ27/8/20101ISA Server 2006 ConfigurationISA Server ဆိုတာကတောံ ယနေ့ခေတးစာ့နေတဲံ ဆိုငးဘာကဖေ့တေမြွာ အသဵု့မ်ာ့တဲံ proxy server တစးမ်ို့ပါ။
က်ြနးတေားအရငး ဆြေ့နြေ့ခဲံတဲံ squid proxy နဲ့ စာရငး ဒီ ISA Server က ပိုမိုလယြးကူလွပါတယး။ က်ြနးတေားတို့ အမ်ာ့စုက
Window နဲ့ ရင့းနွီ့က်ြမှး့ငးပြီ့သာ့ဆိုတောံ ဒီ ISA Server ကို လေံလာလုပးကိုငးရတာ ပိုမိုအဆငျးေပလွပါတယး။
က်ြနးတေားဆြေ့နြေ့မွာက ISA Server 2006 ကို ဆြေ့နြေ့မျွာဖစးပြီ့ ၊ သူ့ကို အငးစတောဖို့အတကြး ပဵုမွနှးင့းဒို့မွာ မရပဲ
Window Server 2003 မွာသာ အငးစတော အသဵျု့ပုနိုငးပါတယး။ Window Server 2003 မွာတငး edition အမ်ို့မ်ို့ရွိပါတယး ။
အောကးပါ edition တေမြွာ ISA Server တငးလို့ ရပါတယး။
Window Server ကိုတငးရမယးဆိုလို့ တနြးမဆုတးသြာ့ပါနဲ့ ။ ISA Server ကို တငးဖို့အတကြး သူ့ပေါ်မွာပဲ ရတဲံအတကြး
သာ တငးရတာပါ။ က်ြနးတေားတို့ Window Server 2003 ကို တစးခါမွ မထိတြေ့ဖူ့ရငးတောငး အသဵျု့ပုနိုငးပါတယး။
သဵု့မွာက ISA Server ဆိုတဲံ ဆောံဖှးဲလးလေ့ပါ။ က်ြနးတေားတို့ ISA Server 2006 ကို mouse ကလေ့ နွိပးတတးယုဵနဲ့ configure
လုပးတတးပါတယး။ အဲံလောကးလယြးပါတယး :P ။ ဒီနေရာမွာ က်ြနးးတေား Window Server 2003 နဲ့ ISA Server 2006
အငးစတောနည့းကို မျေပာတောံပါဘူ့ ။ ဆြေ့နြေ့ခ်ကးမစခငး ISA Server နဲ့ ပကးသကးပြီ့ ပဵုနဲ့တကြ ရွငျး့ပထာ့တဲံ ဆိုကးတေကြို
ဒီဆိုကးတေမြွာ ပဵုနဲ့တကြ ရွငျး့ပထာ့တျာဖစးပြီ့ နာ့လညးရလယြးကူလွပါတယး။ နိဒါန့းပ်ို့နေတာ နည့းနည့းမ်ာ့သြာ့တယး ..:D
က်ြနးတေားတို့ ISA Server 2006 Configure ကို ဆကးသြာ့ရအောငး ..www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ2ISA Server 2006 ConfigurationDeploying ISA Server 2006 asaContent Caching Server
က်ြနးတေားအရငးဆဵု့ အသဵု့မ်ာ့လွတဲံ ISA Server ကို cache server အျဖစး အသဵျု့ပုနည့းကို တငျးပသြာ့မျွာဖစးပါတယး။
ISA Server မတိုငးခငး သူ့အစက Microsoft Proxy Server ကနေ လာပါတယး။ ဒီနေရာလေ့မွာ က်ြနးတေားရွငျး့ပပြီ့သာ့ပါ။
Microsoft Proxy Server ကနေ အခု ISA ဆိုတဲံ acceleration ဆိုတဲံ စာသာ့လေ့က ဒီ cache server အျဖစး အသဵျု့ပုနိုငးတာကို
ရညးရယြးပြီ့ ISA(Internet Securiy and Acceleration) ဆာဗာဆိုပြီ့ ပေ့ခဲံတာပါ။ ဒီတောံ သူက ဘယးလိုလုပးဆောငးသလဲဆိုတာ
က်ြနးတေားတို့ client-1 ကနေ web site တြေ ဖငြးံတဲံအခါ အဲဒါတေကြို cache folder မွာ သိမ့းထာ့ပေ့ပြီ့ ၊ client-2 က
အဲဒီ website ကိုပျဲပနးဖငြးံတဲံအခါ ISA server က အရငးဆဵု့ cache folder မွာ သိမ့းထာ့တဲံ ဖိုငးတြေ ရွိမရွိ အရငးစဵုစမ့းပါတယး။
ရွိရငး မိမိစကးထဲမွာရွိတဲံ cache folder ထဲက ဖိုငးကိုပဲ ထုတးပေ့လိုကးပါတယး။ ဒီအတကြး web site ဖငြးံရတျာမနးလျဲမနးသြာ့ပြီ့ ၊
bandwidth ကို လေ်ာံခ်ပေ့နိုငးပါတယး။ ဒီတောံ ISA server ကို cache server အျဖစး လုပးဆောငးနိုငးဖို့ အတကြး အရငးဆဵု့ cache
နေရာကို ဖနးတီ့ပါမယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ3ISA Server 2006 Configurationအခုလိုပဲ Cache --> Cache Drivers ကနေ Define Cache Drives ကို နွိပးလိုကးပါတယး။မိမိသတးမွတးခ်ငးတဲံ hardisk partition နဲ့ size ကို ထညးံပေ့လိုကးပါ ။ က်ြနးတေားကတောံ C partition တစးပိုင့းတည့းပဲ ရွိတဲံအတကြး
C အောကးမွာပဲ 1000MB နဲ့ တညးဆောကးလိုကးပါတယး။ အဲဒါပြီ့ရငးတောံ Cache Rule ကို သတးမွတးပေ့ရပါမယး။
သူရဲ့ အဓိက လုပးဆောငးခ်ကးမွာ Cache အတငြ့းမွာသိမ့းဆည့းမညးံ Content မ်ာ့အာ့ စစးဆေ့ပျေ့ခင့းနွငးံ
ျပနးလညးသဵု့စြဲမညးံအခ်ိနးပမာဏ တိုိ့ကို ထိန့းခ်ုပးပျေ့ခင့းတို့ပျဲဖစးပါတယး ။
Cache --> Cache Rule ကနေ CreateaCache Rule ကို နွိပးလိုကးပါတယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ4ISA Server 2006 ConfigurationCache Rule Winzard ပေါ်လာပါမယး ။ နာမညးတောင့းရငး မိမိစိတးကြိုကးနာမညးထညးံပေ့လိုကးပါ ။ Next ။
သူက ဘယး destination ကို cache လုပးမွာလဲဆိုတာကို မိမိက external ကို ရြေ့ပေ့လိုကးပါတယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ5ISA Server 2006 Configurationပြီ့ရငး Add လိုကးပါ။ Next ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ6ISA Server 2006 Configuration=> Only ifaValid Version of the Object Exists in the Cache. If No Valid Version Exists, Route the Request to the Server
in the cache and has not expired.
If there is notacurrent version, the ISA server routes the request to the web server on the Internet.
=> If Any Version of the Object Exists in the Cache. If None Exists, Route the Request to the Server
For this option, the ISA server returns an object in the cache, even if it has expired. If it does not exist in the cache,
it routes the request to
the web server on the Internet. This option can run the risk of supplying stale data to requesting clients.
=>If Any Version of the Object Exists in the Cache. If None Exists, Drop the Request (Never Route the Request to the
With this option, clients get web data only from objects that exist in the cache. If an object isn’t in the cache, the
request fails. This isahighly restrictive option, but is useful in scenarios where only specific content is meant to be
to web-browsing clients, and that content is made available with Content download jobs.www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ7ISA Server 2006 Configurationမိမိစိတးကြိုကး နွစးသကးရာ option ထာ့လိုကးပါ။ Next ။Next ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ8ISA Server 2006 Configurationwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ9ISA Server 2006 Configurationအာ့လဵု့ပြီ့ရငးတောံ ပဵုပါအတိုင့း Apply ပေ့ဖို့ မမေံနဲ့နေား ..
က်ြနးတေားတစးခုခ်င့းစီရဲ့ menu အသေ့စိတး ရေ့သာ့ဖောျးပခ်ငးပေမဲံ တစးခုခ်င့း ရွင့းနေရငး ပြီ့တောံမွာ မဟုတးတောံတဲံအတကြး
အရေ့ကြီ့မယးထငးတာတေပြဲ ရေ့သာ့ဖောျးပပေ့လိုကးတာပါ ။ က်နးတာ ပဵုတေကြို ကို့ကာ့ပြီ့လုပးလိုကးပါ ။
cache နေရာတြေ သတးမွတးပြီ့ဆိုတောံ က်ြနးတေားတို့ အငးတာနကးတေကြို ဘယးသူတေကြို ပေ့မလဲဆိုတာ ဆကးလုပးရအောငး ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ10ISA Server 2006 Configuration
က်ြနးတေား ISA Server 2006 မွာ cache create လုပးတာ ၊ cache rule တြေ ရွငျး့ပပြီ့နောကး အခုဆကးလကးပြီ့ ၊Network Creation နဲ့ Firewall Policy တြေ ဆကးဆြေ့နြေ့ပါမယး။ မိမိဆာဗာကနေ အငးတာနကျးပနးပေ့ဖို့အတကြး internal nework
သတးမွတးပြီ့ ၊ squid မွာလိုပဲ သတးမွတးထာ့တဲံ internal network ကို ခငြျးံပုဖို့အတကြး firewall policy နဲ့ allow လုပးပါမယး။
ဒီတောံ အရငးဆဵု့ က်ြနးတေား Network Topology တစးခု လုပးလိုကးပါမယး။ ISA မွာ Network Topology အတကြး အသငးံသဵု့
Network Template တြေ ရွိပါတယး ။ မိမိနဲ့ ကိုကးညီရာတစးခုကို ယူသဵု့ယဵုပါပဲ ။ က်ြနးတေားကတောံ small network
ဆိုကးဘာကဖေ့တြေ အတကြးလောကးပဲ ရွငျး့ပမယးဆိုတောံ Edge Firewall ကိုရြေ့ပြီ့ ရွင့းလိုကးပါမယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ11ISA Server 2006 ConfigurationNetwork --> Templates ကနေ Edge Firewall ကို က်ြနးတေားရြေ့လိုကးပါတယး ။ သူက Network Card2ကဒး ရွိရပါမယး ။
တစးခုက အငးတာနကး အှငျးဖစးပြီ့ ၊ နောကးတစးခုကနေ က်ြနးတေားက internal network အတကြး အငးတာနကျးပနးပေ့မွာပါ။
Next ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ12ISA Server 2006 ConfigurationNextwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ13ISA Server 2006 ConfigurationAdd Adapter ကနေ က်ြနးတေားက internal network အတကြး အငးတာနကျးပနးပေ့မျွာဖစးတဲံအတကြး Local Area Connection2ကို
Local Area Connection2ဆိုတာ internal network အတကြး သတးမွတးထာ့တဲံ NIC ပါ ။ အဲဒီ NIC ရဲ့ IP Range ကို က်ြနးတေားက
192.168.0.1 နဲ့ သတးမွတးထာ့တာပါ။ မိမိစိတးကြိုကးသတးမွတးနိုငးတယးနေား ။ Next ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ14ISA Server 2006 Configurationအကြမ့းဖ်င့း Allow unrestriced access ဆိုပြီ့ အကုနးခငြျးံပုထာ့လိုကးပါမယး ။နောကးမွ အဲဒါတြေ ကို အသေ့စိတး ထပးဆြေ့နြေ့ပါံမယး ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ15ISA Server 2006 Configurationအခုဆိုရငး Network နေရာခ်ထာ့မှုတြေ ပြီ့ပါပြီ့ ။ အငးတာနကးပေ့ဖို့အတကြး အဆငးသငျးံဖစးနေပါပြီ့ ။ ဒါပေမဲံ အငးတာနကးပေ့ဖို့
ခငြျးံပုခ်ကးကို Firewall Policy ကနေ ခငြျးံပုခ်ကး ယူရပါဦ့မယး ။ squid proxy မွာလို တစးခုခုကြောျးငာပြီ့ရငး allow/deny
အခု Firewall Policy --> Tasks ကနေ Create Access Rule လုပးလိုကးပါ။မိမိနွစးသကးရာနာမညးနဲ့ တစးခုခုပေ့လိုကးပါ ။ ပြီ့ရငး allow and deny လာပါမယး ။ ခငြျးံပုခ်ငးတာဆိုတောံ Allow ပေါံ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ16ISA Server 2006 Configurationwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ17ISA Server 2006 ConfigurationSelected protocols ကနေ Add ကို နွိပးပြီ့ မိမိခငြျးံပုခ်ငးတဲံ protocol တေကြို ရြေ့ပေ့ပါ ။ ဒီနေရာမွာ web cache ကို အဓိက
ထာ့ခ်ငးတျာဖစးတဲံအတကြး HTTP and HTTPS ၂ ခုကိုပဲ ရြေ့လိုကးပါတယး ။ အကုနးခငြျးံပုခ်ငးရငးတောံ အကုနးရြေ့ပေါံ ။
Next ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ18ISA Server 2006 Configurationwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ19ISA Server 2006 ConfigurationAccess Rule Source ကို မိမိအငးတာနကးပေ့ခ်ငးတဲံ source ကို ပေ့ရမျွာဖစးပါတယး ။
မိမိ ဆာဗာထိုငးတဲံစကးမွာပါ အငးတာနကး ရခ်ငးရငး အခုလိုပဲ Localhost ပါ Add ပေ့ရပါတယး။
မ Add ထာ့ရငး ဆာဗာစကးမွာပါ အငးတာနကးသဵု့လို့ မရပါဘူ့ ။ Next ပါ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ20ISA Server 2006 ConfigurationAccess Rule Destination မွာတောံ External ကို ရြေ့ပေ့ရပါမယး။ External(internet) က resource တေကြို internal network
အတကြျးပနးလညးပေ့မျွာဖစးပါတယး ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ21ISA Server 2006 ConfigurationUser အာ့လဵု့ကို ခငြျးံပုခ်ငးတျာဖစးတဲံအတကြး Next ပေ့နိုငးပါတယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ22ISA Server 2006 Configurationပြီ့ပါပြီ့ခငးဗ်ာ ။ ဒါဆိုရငး အကြမ့းဖ်င့းအျာ့ဖငးံ ISA Server ထိုငးပြီ့ internal network အတကြး အငးတာနကး
ျပနးလညးပေ့နိုငးပြျီ့ဖစးပါတယး။ client စကးကနေ အငးတာနကးရမရ စမ့းသပးဖို့အတကြး web browser ထဲမွာ server ip address and
port ထညးံပေ့ရမျွာဖစးပါတယး။ port ကတောံ 8080 ဆိုပြီ့ default ရွိပါတယး။ server ip ကတောံ
မိမိဆာဗာသတးမွတးထာ့တဲံအတိုင့းပေါံဗ်ာ ။ က်ြနးတေားဆိုရငး 192.168.0.1 ပါ။
ဒါကတောံ client ဘကးကနေ ခ်ိတးဆကးဖို့အတကြး သဵု့လိုကးတာပါ ။ အဲလို client စကးနေ အငးတာနကးရယူဖို့အတကြး client
ဘကးက လုပးနိုငးတာ ၃ နည့းရွိပါတယး။
က်ြနးတေားတို့ ISA Server ကို အောငးအောငျးမငျးမငး run နိုငးပြီ့တဲံနောကး ၊ သူ့ကနေ အငးတာနကျးပနးယူမဲံ client
စကးတေကြို configure ခ်ပေ့ဖို့ လိုပါမယး။ ပဵုမွနးအျာ့ဖငးံ web browser မွာ host and port ထညးံလိုကးရငး ရတတးပါတယး။
ISA မွာတောံ client တြေ ၃ နည့းရွိပါတယး။
(1)Secure NAT client(2)Web Proxy client(3)Firewall client ဟူ၍ျဖစးသညး။
၄င့း client ၃ မ်ို့သညး ISA Server မွ support လုပးပေ့ထာ့သော client type မ်ျာ့ဖစျးပီ့ ၊ client စကးတြေ ယူသဵု့ခ်ငးပါက၄င့း client type ၃ မ်ို့အတငြ့းမွ တစးခုခုကို သတးမွတးပေ့ရမညျးဖစးသညး။(1)Secure NAT client
သူ့ကို အသဵျု့ပုဖို့အတကြး server ရဲ့ ip address ကို client စကးရဲ့ ip configuraion မွာ default gateway အျဖစး
သတးမွတးပေ့ရတာပါ။ ဒီလိုလေ့ပါ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ23ISA Server 2006 Configuration'ဒီနေရာမွာ 192.168.137.1 ဟာ Server ရဲ့ IP Addressျဖစးပါတယး။(2)Web Proxy client
ဒါကတောံ က်ြနးတေားတို့ အမ်ာ့ဆဵု့ သဵု့ကြတဲံ ပဵုစဵပေါံ။ မိမိသဵု့မဲံ web browser မွာ HTTP host and port မွာ
ဆာဗာရဲ့ အိုငးပီ address ထညးံပေ့ရတာပါ။ port ကတောံ အကြမ့းအျာ့ဖငးံ 8080 ပေါံ။ ဥပမာ mozilla firefox အတကြးဆိုရငး ..www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ24ISA Server 2006 Configuration(3)Firewall client
ဒီကောငးကို သဵု့ဖို့အတကြးတောံ software တစးခု အငးစတောပေ့ရပါမယး။ Download
အဲဒါကိုတောံ က်ြနးတေားလဲ မစမ့းတောံပါဘူ့။ စမ့းခ်ငးရငး မိမိဘာသာ ဒေါင့းလုပးခ်ပြီ့ အငးစတောစမ့းလိုကးပါခငးဗ်ာ ။အသေ့စိတးကို အောကးကလငးံမွာလဲ လေံလာနိုငးပါတယးခငးဗ်ာ။
http://www.linglom.com/2009/11/25/getting-started-with-microsoft-isa-server-2006-part-9-client-configuration/www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ25ISA Server 2006 ConfigurationISA Server 2006 Configuration For Parent Proxy
အရငးက က်ြနးတေားတငျးပခဲံတဲံ configuration တေဟြာ direct connection ရသူတေအြတကြျးဖစးပါတယး။
တကယးလို့ မိမိသဵု့နေတဲံအငးတာနကးဟာ proxy number တြေ ထညးံရတဲံ parent proxyျဖစးနေရငးတောံ တစးနေရာ
ျပငးပေ့ဖို့ လိုပါသေ့တယး။ အဲံအတကြး က်ြနးတေားတို့ web chaining rule ကို လုပးပေ့ရပါမယး။
အဲဒါကတောံ မိမိတို့ ထညးံရတဲံ host and port ကို ထညးရ
ံ မဲံ နေရာပေါံ။ပဵုပါအတိုင့း Networks --> Web Chaining --> Tasks --> Create New Web Chaining Rule ကို ရြေ့လိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ26ISA Server 2006 ConfigurationDestination ကို External ကို ရြေ့ပေ့ရပါမယး။ ပြီ့ရငး Add လိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ27ISA Server 2006 Configurationဒီနေရာမွာ မိမိတို့ proxy host and port ထညးံဖို့အတကြး Redirect requests toaspecified upstream server ကို
အမွနျးခစးပေ့လိုကးပါတယး။ တကယးလို့ မိမိသဵု့တဲံအငးတာနကး host and port သာမက username and password ပါ ထညးံရတဲံဟာ
ျဖစးရငးတောံ အောကးကဟာပါ အမွနျးခစးထပးပေ့ဖို့ လိုပါမယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ28ISA Server 2006 Configurationမိမိသဵု့ရတဲံ အငးတာနကးက username and password လိုရငးတောံ Use this account ကို အမွနျးခစးပေ့ပြီ့ ၊ Set Account ကနေ
မိမိတို့ username and password ကို ထညးံပေ့ရပါမယး။ ဒီအတိုင့း host and port ထညးံပေ့ဖို့ပဲ လိုပါက အောကးက
Use this account ကို အမွနျးခစျးဖုတးပေ့ဖို့ လိုပါမယး။
Next ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ29ISA Server 2006 Configurationဒါကတောံ မိမိ upstream server down ရငး ဘယးဟာကို လုပးမလဲဆိုတာပေါံ ။ မလိုအပးဘူ့ထငးလို့ Ignore ကို ရြေ့လိုကးပါတယး။ဒါဆိုရငး မိမိအငးတာနကး proxy host and port ထညးံပေ့ရသူမ်ာ့အတကြး အဆငျးေပသြာ့ပါပြီ့ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ30ISA Server 2006 ConfigurationHow to allow ping from local computer to ISA Server
ISA Server က ဘယးလောကး လဵုခြဵုရေ့ကောင့းသလဲဆိုရငးတဲံ သူကခငြးံမျပုရငး Local computer တေကြ
အငးတာနကးရနေရငးတောငးမွ သူ့ဆီကို ping လို့ မရဘူ့တဲံဗ်ာ .. သူက အဲလိျုေပာတောံလဲသူ့ဆီက ping နိုငးအောငး
ခငြျးံပုခ်ကးရယူတာပေါံဗ်ာ ။ ဟုတးကဲံ .. ping လို့ရတောံရော ဘာအက်ို့ကေ့်ဇူ့ရွိပါသလဲ ?
က်ြနးတေားတို့ ISA Server ကို remote desktop အနေနဲ့ အသဵျု့ပုတဲံအခါ အသဵျု့ပုတာပေါံ .. နောကးတစးခုက ping
လို့ရနေတျာဖစးတဲံအတကြး ကေားနကးရွငးက်ရငး ဆာ ဗာဘကးကျဖစးတာလာ့ဆိုတာ local computer တေကြ
ping ကြညံးတောံ connect ရနေတာမွန့းသိတာပေါံ ။ remote desktop အနေနဲ့ အသဵျု့ပုတာကို က်ြနးတေား နောကးပို့စးတေမြွာ
လောလောဆယး ping ရအောငး ..
Firewall Policy ကနေ Edit System Policy ကို သြာ့ပါ။အဲဒါဆို Sysmtem Policy Editor ပငြးံလာပါမယး။ အခုလိုပဲ ICMP(Ping) ကို နွိပးလိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ31ISA Server 2006 ConfigurationDefault အျာ့ဖငးံ သူက Enable ပေ့ပြီ့သာ့ပါ ။ ဒါဆို ဘာလို့ မရသလဲ ? ဟုတးကဲံ .. ဘယးသူ့ကို enable ပေ့ထာ့သလဲဆိုတာ
ကြညးပါဦ့ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ32ISA Server 2006 ConfigurationFrom tab ကနေ ကြညးံလိုကးတောံ Remote Management Computers ကို သူက enable ပေ့ထာ့တာလေ ။ အမွနးတောံ Remote
Management Computers က နာမညးသာရွိပြီ့ သူ့ကို IP Address မသတးမွတးပေ့ရသေ့ပါဘူ့ ။
ဒီတောံ Remote Management Computers ကို ping ခ်ငးတဲံ IP Address သတးမွတးပေ့လိုကးရငး အိုကေပါပြီ့။
Remote Management Computers ကိုနွိပးပြီ့ Edit လုပးလိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ33ISA Server 2006 ConfigurationAdd --> Computer ကနေ local computer ip address ကို ထညးံရပါမယး။ ping ခ်ငးတဲံ address ပေါံ။Name မွာ မိမိပေ့ခ်ငးရာ ပေ့ပေါံ ။ IP Address မွာတောံ မိမိ လိုကယးကနြးပ်ူတာ ip ပေ့ပေါံ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ34ISA Server 2006 ConfigurationDescription ကတောံ ဒီလိုပါပဲ .. ရေ့ခ်ငးရာ ရေ့ပေါံ။ဒါဆို အိုကေပါပြီ့ ။ internal network က computer ကနေ server ip ကို ping ကြညးံပါ။
replyျပနးလာတာကို တြေ့ရပါမယး။ကို့ကာ့ ။။http://www.elmajdal.net/isaserver/How_to_Allow_Ping_From_Selected_Computers_To_ISA_Server_Machine.aspxwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ35ISA Server 2006 ConfigurationRemote Desktop to ISA Server 2006 Using Microsoft Management Console (MMC)
Remote Desktop ဆိုတာကတောံ မိမိသဵု့နေတဲံနေရာကမဟုတးပဲ မိမိနကှးပးအတငြ့း တစးနေရာရာကနေ မိမိဆာဗာကို
လွမ့း control ပေ့နိုငးတာပါ။ ပဵုမွနးအျာ့ဖငးံ အိမးတို့ ၊ ဆိုငးဘာကဖေ့တို့အတကြးဆိုရငး သိပးမသိသာပေမဲံ ကုမ္ပဏီတို့ ၊ ရဵု့တေမြွာဆိုရငး
တစးနေရာရာကို ရောကးနေရငး အရေ့တကြီ့ လွမ့း control ပေ့ခ်ငးရငး ဆာဗာဆီ သြာ့နေစရာမလိုပဲ ရောကးနေတဲံနေရာကနေ
မိမိဆာဗာကို configure လွမ့းလုပးနိုငးပါတယး။ ဆိုကးဘာကဖေ့တေအြတကြးဆိုရငးတောံ
monitor တို့ ၊ keyboard တို့ မလိုတောံပါဘူ့နေား :P ISA Server ကို Remote Desktop အျဖစးသဵု့ခ်ငးရငးတောံ အသဵျု့ပုနိုငးတဲံနည့း
1. Microsoft Management Console (MMC)
3. Web Managementတို့ပျဲဖစးပါတယး။MMC နဲ့ Terminal Server မွာ MMC ကတောံ တစးခ်ိနးတည့းမွာတငး ISA Server အမ်ာ့ကြီ့ကို manage လုပးနိုငးပြီ့ ၊ ISA Server ကို
connect လုပးတာ ကြာပါတယး။ Terminal Server ကတောံ ISA Server ကို တိုကးရိုကးခ်ိတးဆကးတျာဖစးပြီ့ connect
အရငးဆဵု့ Microsoft Management Console (MMC) နဲ့ လွမ့းထိန့းတာကို ဆြေ့နြေ့ပါမယး။
အဲံအတကြး အရငးဆဵု့ Firewall policy --> Edit System Policy ကို သြာ့ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ36ISA Server 2006 Configurationအခုလိုပဲ Remote Management မွာ တြေ့ပါပြီ့ .. ၃ နည့းပါ ။ MMC , Terminal Server and Web Management ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ37ISA Server 2006 Configurationပြီ့ရငး From tab ကနေ Remote Management Computers ကို Edit လုပးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတောံ Remote Management
Computers ဆိုတဲံနာမညးကို မညးသညးံ IP မွမသတးမွတးပေ့ရသေ့လို့ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ38ISA Server 2006 ConfigurationAdd --> Computerမိမိ client စကး ip ထညးံပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ39ISA Server 2006 Configurationဒါက ဆာဗာအပိုင့းက လုပးဖို့အပိုင့းပေါံ .. ဆာဗာဘကးကတောံ တှာနးက်ေပါပြီ့ ။
client ဘကးကနေ ဆာဗာကို remoteှငးနိုငးဖို့အတကြး လုပးပေ့စရာလိုပါသေ့တယး။
client ဘကးကနေ ဆာဗာကို manage လုပးနိုငးဖို့အတကြး client စကးမွာ ISA Server 2006 ကို တငးပေ့ရပါမယး။
ိ င့းဒို့ပေါ်မွာ ISA Server 2006 ကို အငးစတောလိုကးပါ။
အငးစတောပြီ့ပါက အောကးပါအတိုင့း Connect to Local or Remote Server ကှိုငးလိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ40ISA Server 2006 ConfigurationAnother Computer(remote management) မွာ ဆာဗာ နာမညးထညးံပေ့နိုငးသလို ၊ IP Address ထညးံပေ့လဲ ရပါတယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ41ISA Server 2006 Configurationဆာဗာနာမညးကို မိမိ ISA Server မွာ ကြညးံလိုကးရငး ရပါတယး။ IP Address ထညးံမယးဆိုရငးလဲ IP Address က internal IP ဆိုရငး
ရပါတယး ။ က်ြနးတေားဆို 192.168.0.1 လို့ ပေ့ထာ့ပါတယး။ Username and Password ကတောံ Window Server 2003 မွာ
Loginှငးရတဲံ user and password ပါ။ ဒါဆိုရငး က်ြနးတေားတို့ ISA Server ကို remote သဵု့နိငးပါပြီ့။ တကယးလို့ မိမိက
မသဵု့ခ်ငးတောံလို့ disconnect လုပးမယးဆိုရငး အခုလိုပဲ လုပးနိုငးပါတယး။ဒါဆိုရငး ISA Server ကို remote desktop အျဖစး အသဵျု့ပုတဲံ နည့းတစးနည့း ပြီ့ပါပြီ့ ။ကို့ကာ့ ။။http://www.elmajdal.net/isaserver/Administrating_ISA_Server_2006_Remotely_Using_MMC_and_Remote_Desktop_C
onnection.aspxRemote Desktop to ISA Server 2006 Using Terminal Server
အရငးပို့စးမွာ Microsoft Management Console (MMC) ကိုသဵု့ပြီ့ remote desktop အျဖစး အသဵျု့ပုတာကို
ဆြေ့နြေ့ပြီ့ပါပြီ့ ။ အခု က်ြနးတေား Terminal Server ကို အသဵျု့ပုပြီ့ remote desktop လုပးတာကို ဆြေ့နြေ့ပါမယး။
ထဵု့စဵအတိုငး Remote Managemnet Computers ကို ထောကးပြီ့ Edit လုပးပါမယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ42ISA Server 2006 Configurationအရငးပို့စးတေမြွာျေပာခဲံသလိုပဲ Edit ကနှေငးပြီ့ internal network ရဲ့ computer ip address ကို သတးမွတးပေ့လိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ43ISA Server 2006 Configurationပြီ့ရငး က်ြနးတေားတို့က Terminal Server ကို သဵု့ခ်ငးတျာဖစးတဲံအတကြး သူ့ကို enable ပေ့ဖို့လိုပါမယး။
Start > Administrative Tools > Terminal Services Configuration ကို ဖငြံးလိုကးပါ ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ44ISA Server 2006 Configurationပဵုပါအတိုင့း right click RDP-Tcp လုပးပြီ့ Properties ကှိုငးလိုကးပါ။ အဲဒီမွာ Network Adapter ကို နွိပးပြီ့ အဲံကနေ မိမိ Internal
NIC ကို ရြေ့ပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ45ISA Server 2006 Configurationက်ြနးတေားက wireless နျဲ့ပနးပေ့တာမို့ wireless NIC ကို ရြေ့ထာ့တာနေား .. မိမိတို့ အငးတာနကျးပနးပေ့မဲံ NIC ကို ရြေ့ပေ့ဖို့
လိုပါမယး။ ပြီ့ရငး My Computer ကျိုပနးသြာ့ပြီ့ right click --> Properties ကိုသြာ့ပါ။အဲဒီမွာ Enable Remote Desktop on this computer ကို အမွနျးခစးပေ့လိုကးပါ။
အိုကေပါပြီ့... ဆာဗာပိုင့းက လုပးဆောငးစရာ ကုနးပါပြီ့ ။
ဒီတောံ client ဘကးကနေ manage လုပးဖို့ ကြညးံရအောငး ..
မိမိကနြးပ်ူတာရဲ့ (က်ြနးတေားဆို window 7) Start > All Programs > Accessories > Remote Desktop Connection ကို
ဖငြးံလိုကးပါ။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ46ISA Server 2006 ConfigurationComputer မွာ server name(or)ip address ကို ထညးံပြီ့ Connect လုပးလိုကးပါ။
အခုလိုပဲ username and password တောင့းလာပါလိမံးမယး။ အဲဒါက Window Server login password ပါ ။Loginှငးပြီ့ပါက အခုလိုပဲ အသငံးသဵု့နိုငးတဲံ အနေအထာ့ကို တြေ့ရပါပြီ့။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ47ISA Server 2006 Configurationကို့ကာ့ ။။http://www.elmajdal.net/isaserver/Administrating_ISA_Server_2006_Remotely_Using_MMC_and_Remote_Desktop_C
onnection.aspxBandwidth Control With ISA Server 2006
ISA Server မွာ bandwidth control အတကြး built in feature မပါပါဘူ့ ။ အဲအတကြး third party software တစးခုခု
သဵု့ပေ့ရပါမယး။ bandwidth control အတကြး ဒီဆိုကး မွာ စဵုစဵုလငးလငးဖောျးပပေ့ထာ့ပါတယး။
ျပနးလညးဖောျးပရမယးဆိုရငး bandwidth control အတကြး သဵု့နိုငးတဲံ ဆောံဖှးဲလးတေကြတောံ ....
Free Realtime NetFlow Analyzer
Websense Enterprise Bandwidth Optimizer စသညးတို့ပေါံ ..
အဲဒီထဲက တစးခ်ို့ဟာ client စကးမွာ အငးစတောပေ့ဖို့ လိုတာတြေ ရွိပါတယး ။ အဲဒီထဲက TrafficQuota ကို
က်ြနးတေားစမ့းသဵု့ကြညးံတာ တေားတေားလေ့ အဆငျးေပလိျု့ပနးလညးဆြေ့နြေ့ပေ့လိုကးပါတယး။ သူက client စကးတေအြတကြး
အငးစတောစရာမလိုပဲ ၊ က်ြနးတေား ဖိုငးတစးဖိုငးကို ဒေါင့းပြီ့ ၊ ဆာဗာကနေ limit တြေ သတးမွတးကြညးံတာ
တစးခါတည့း bandwidth တန့းက်သြာ့ပြီ့ ၊ ဆာဗာက သတးမွတးသလောကး ခ်ကးခ်င့း က်သြာ့တာကို တြေ့ရပါတယး ။
မိတးဆေတြို့လဲ သဵု့ဖူ့လို့ ကောင့းတဲံ ဆောံဖှးဲလးတေရြွိရငး က်ြနးတေားံကို လကးတို့ပေ့ခဲံကြဦ့နေား ..
လောလောဆယး က်ြနးတေား TrafficQuota နဲ့ပကးသကးပြီ့ ဆြေ့နြေ့ပါမယး။
အရငးဆဵု့ TrafficQuota ဆောံဖှးဲလးကို အောကးကလငးံတေမြွာ ဒေါင့းလိုကးပါ။
http://dl.dropbox.com/u/9563152/TrafficQuota.rarwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ48ISA Server 2006 Configuration(or)
ဒေါင့းပြီ့ရငး အငးစတောလိုကးပါ ။ ဒါဆို သူက ISA Server မွာ သြာ့ပြီ့ integrate သြာ့လုပးပါတယး။အခုလိုပဲ TrafficQuota --> Computer ကနေ New Quota --> Computer လို့ create လိုကးပါတယး။ အမွနးတောံ က်ြနးေ တားက IP
Address နဲ့ သတးမွတးခ်ငးလို့
အခုလို Computer ဆိုပြီ့ ရြေ့လိုကးတာပါ ။ မိမိဘာသာ User နဲ့ သတးမွတးခ်ငးရငး User ကို ရြေ့ရပါမယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ49ISA Server 2006 Configurationip ကတောံ client စကး ip တျြေဖစးမယးပေါံ။Bandwidth မွာ က်ြနးတေားက download and upload ပါ သတးမွတးခ်ငးလို့ Outgoing and incoming ကို ရြေ့လိုကးပါတယး။
က်နးတာကတောံ မိမိစိတးကြိုကး ယူဇာတေကြို ပေ့ခ်ငးသလောကး သတးမွတးပါ။
က်နးတဲံ Daily , Weekly, Monthly တို့ကတောံ နေ့အလိုကး သတးမွတးခ်ငးတာတေပြေါံ ။ ဒါကတောံ မိမိတို့ စိတးကူ့ရွိသလို
အသဵျု့ပုနိငးပါတယး။www.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံ50ISA Server 2006 Configuration
ဒီလောကးဆို အဆငျးေပမယးထငးပါတယး ။ က်ြနးတေား ဒီနေရာလေ့မွာပဲ ကြ် နးတေားံ ဆြေ့နြေ့မှုကို အဆဵု့သတးလိုကးပါမယး။အသေ့စိတး ဆြေ့နြေ့လိုပါက www.myanmarengineer.org မွာ က်ြနးတေားတို့ကို တြေ့နိုငးသလို ၊ www.phoelapyae.com မွာလဲ
အာ့လဵု့ပဲ အဆငျးေပျေပသဵု့နိုငးပြီ့ ၊ျမနးမာအခ်င့းခ်ငျး့ပနးလညှးေမ်ွကုသိုလးယူနိုငးကြပါစေခငးဗ်ာ ....ရာမညဖို့ လျပညးံwww.phoelapyae.comရာမညဖို့လျပညးံAll pages:23471116232631364042464849InfoSaveLikeShareDownloadMoreISA server Published on Apr 10, 2011 Learn ISA server.silencezmutexFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore